Zvivakwa zvemazuva | Kudya kweNutri
Mazuva anoonekwa kubva misi yemichindwe uye tinogona kuzviwana makore anodarika zviuru zvitanhatu apfuura. Kurimwa kwaro kwakatangira muSoutheast Asia neNorth Africa, zvichizopararira kunyika dzinodziya.
Zvibereko zvemuchindwe zvine zvinhu zvakawanda izvo vazhinji vasingazive nezvazvoNaizvozvo, isu tinouya pano kuzokuudza izvo mabhenefiti acho uye zvavanogona kukuitira.
El date kunge muchero iri denderedzwa muchimiroIne shava muvara, nyama yayo yakasimba uye inotapira uye mukati tinowana pfupa rakareba. Tinogona kuwana zvienzaniso kusvika kumasendimita mana pakureba. Sezvatakambotaura, kurimwa kwayo kwakanyanya munzvimbo dzeMiddle East, North Africa nedzimwe nzvimbo dzeCalifornia. Kunyangwe pari zvino, tinogona kuzviwana munzvimbo dzakasiyana pasi.
Iwo anowanzo kuverengerwa muboka renati, ivo vanorapwa zvakafanana namazambiringa akaomeswa kana maapurikoti akaomeswa, zvisinei, misi inokura nekukura pamuti iwo pachawo.
Sezvaunoziva, hapana imwe chete mhando yemusiIzvo zvinogara zvichitsamira parudzi rwemuchindwe. Izvo zvinonzi iyo yakanakisa mhando yemadate inowanikwa munzvimbo ye Tunisia, vane ganda rakatsetseka, rakatsetseka uye rakasviba. Pane rimwe divi, turkish misi Iwo zvakare ane mukurumbira kwazvo, akasviba muvara uye akaomesesa. Pakupedzisira, tinowana misi, kubva Elche izvo zvemhando yepamusoro.
1 Maitiro ekushandisa mazuva
2 Zvivakwa uye zvakanakira mazuva
3 Matipi ekubata nemazuva
Maitiro ekushandisa mazuva
In the chikafu cheMediterranean Ivo anoshandiswa zvakanyanya, uye anogona kushandiswa ese ari maviri madhiri, sekudya kukuru kana chero mhando yedhishi.
Kana pfupa rabviswa, tinogona kuzadza nemimwe michero yakaomeswa kana imwe sizi.
En Greece neTurkey, vanozvigadzira pamwechete nenyama nehove.
Tinogona kuwana vhiniga yemusi, zvinogona kuitwa chutney, muchimiro chepasta nembeu yezvigadzirwa zvebheka.
Hatifanire kukanganwa izvozvo miti yemitiKubva muchanza tinowana moyo yemichindwe, iyo inoshandiswa mumasadhi.
Zvivakwa uye zvakanakira mazuva
Mazuva anotipa hutano hwakakura hunotorwa nemuviri wedu masikati. Mazuva anozivikanwa nekutipa isu yakawanda simba uye nekuvandudza manzwiro edu.
Tevere tinokuudza iwe kuti ndeapi mabhenefiti akanakisa atinowana kubva kumisi.
Zvinokurudzirwa kudya misi mu nguva yekudzidza kana kana panodiwa simba rakawandisa.
Ivo vanowedzera kugona kwepfungwa uye kugona.
Icho chikafu chakapfuma mukati antioxidant amino acids.
Irwa seizvi vakasununguka radicals.
Ivo vanopa mahydrate e kabhoni, potasium, phosphorus, calcium y mangnesiamu.
Ine acid pantothenic, zvakafanira kushandura mafuta kuita makabhohaidhiretsi uye simba.
Zuva racho rinotibatsira kuti tiite mumutambo wedu watinofarira. Icho chinopisa kugadzira mhasuru.
Rwisa iyo kushungurudzika la kuzvidya mwoyo uye inotibatsira kuti tirare.
Tidzivirire kuva Zvikamu zvekushushikana.
Iyo yakafuma mune fiber, nekudaro, inotibatsira kurwa kuvimbiswa.
Inobatsira kudzikisa cholesterol muropa. Izvo hazvina kana chero mafuta uye anobatsira kudzora nhanho.
Ivo vanovandudza uye kutora chikamu mune yakanaka kugaya, kunorerutsa iyo kupatirwa, dzivisa gasi uye ikubatsire kuti usanyanya kuwedzera huremu
Inopa mashuga akakosha anotipa simba. Mashuga echisikigo ndiwo glucose, fructose uye sucrose.
Ivo vakapfuma musimbi, saka mashandisiro ayo anokurudzirwa kune avo vese vanayo kupererwa neropa, kana vanhu vakura vanoda imwe simba rekuwedzera.
Pane rimwe divi, upfumi mu potasium uye wakanyanya kuderera mune sodium, misi inobatsira kudzora tsinga.
Matipi ekubata nemazuva
Mazuva ane hupenyu hwakareba, kunyangwe izvo hazvireve kuti iwo haaende zvakaipa. Iwe unofanirwa kuziva nzira yekuzvichengeta nekuzvichengetedza zvakanaka kuti zvisazonyanye kushata. Nechikonzero ichi, tinokurudzira kuzvichengetera mumidziyo yegirazi uye isina girazi, munzvimbo yavasina kuratidzwa nechiedza.
Sezvatakataura, zuva iri rakapfuma muhuwandu hwakawanda hwezvinhu zvinovaka muviri uye mamineral, senge calcium, phosphorus, potasium, magnesium uye mavhitaminzi eboka B, provitamin A, C uye D. Usazeze kuzviisa mudhayeti yako kuti ugone kubatsirwa navo vese. Iwe unogona kupedza avhareji yemazuva matatu ne mashanu pazuva.
Iwo kuravira kwavo kunotapira, ivo vari kuguta uye dzinogona kupedzwa mukudya zvishoma, zvisinei, hatifanire kuvashungurudza nekuti vakapfuma mushuga, izvo kunyangwe zvinobatsira zvinogona kushandura kuonda kwedu.
Sezvawaona, misi idiki inodyiwa kwezviuru zvemakore, uyu muchero mudiki wemuchindwe unogona kuwanikwa mune zvese masupamaketi, misika uye zvitoro zvemadhipatimendiNekudaro, hunhu hwayo hunosiyana zvichienderana nekwaunobva.
Tsvaga hunhu hwakanakisisa uye uwane kuti iwo mazuva aunonyanya kufarira anobva kupi, zvirokwazvo iwe uchawana mamwe aunoda uye nawo aunogona kugadzira zvinonaka mabikirwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Nutrition » Zvivakwa zvemazuva
Uric acid inorambidzwa chikafu